प्रधानमन्त्री ओलीको चन्द्रमा ‘दाहिने ?’ आफ्ना दुई मन्त्री फालेरै भदौंसम्म प्रचण्डले ओलीलाई सघाउने ! – YesKathmandu.com
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चन्द्रमा दाहिना भएकै हुन ? ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै ‘दक्षिण’ देव्रे भएर कहिले नाकाबन्दी लगाएर त कहिले सरकार ढाल्न अनेक अस्त्र प्रयोग गर्दा समेत उस्ले सफलता पाउन नसकिरहेकै बेला सत्ता साझेदार दल एकिकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सँगको सम्बन्ध चिस्सिएको विश्लेषण अनेक कोणबाट भइरहँदा परिस्थिती भने तीन सय साठी डिग्रीको कोणमा परिवर्तन भएको छ ।
वजेट घोषणा गरिएसँगै सत्ताको ताला चावी पुष्पकमल दाहाललाई सुम्पिएर प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट बाहिरिने ‘भद्र सहमति’बारे टिका टिप्पणी भइरहदा आफ्ना दुई मन्त्रीलाई फालेरै भए पनि एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारलाई भदौ महिनासम्म साथ दिन उनी तयार रहेको खबर बाहिरिएको छ ।यही कारण ओली नेतृत्वको सरकार अझै तीन महिनासम्म रहने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अबको केही दिनमै गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र आपूर्तिमन्त्री गणेशबहादुर पुनलाई आउट गर्न प्रचण्ड तयार देखिएका छन् । त्यस स्थानमा नयाँ अनुहार ल्याउन प्रचण्ड समेत राजी भएको स्रोतको दावी छ । यसरी प्रचण्डलाई कन्भिन्स गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग र प्रचण्ड बीच भएको वान टु वान गोप्य वार्ताको क्रममा यस्तो सहमति भएको रहस्य खुलेको छ । प्रचण्डसँग ओलीले निकै लामो कुराकानी गरेका थिए । ‘अहिले भारतसँग मलाई लड्न दिनुहोस, यसमा तपाईंको साथ चाहिन्छ ।’ ओलीले प्रष्ट कुरा राखेपछि प्रचण्ड समेत त्यसमा कन्भिन्स भएका हुन । यहि क्रममा गृहमन्त्री र आपूर्तिमन्त्रीलाई समेत परिवर्तन गर्न प्रचण्ड राजी भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट सुत्रले दावी गरेको छ ।
‘प्रचण्डसँग भएको सहमतिमा इमानदार भए भदौंबाट ओलीले सरकारको नेतृत्व छाड्नेछन् र प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रुपमा आउनेछन् ।